ထိုင်းတွေဘာ့ကြောင့် ဦးအောင်ဇေယျကို မုန်းတာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ထိုင်းတွေဘာ့ကြောင့် ဦးအောင်ဇေယျကို မုန်းတာလဲ
ထိုင်းတွေဘာ့ကြောင့် ဦးအောင်ဇေယျကို မုန်းတာလဲ
Posted by phone_kyaw on Mar 21, 2012 in Copy/Paste | 16 comments
ShweNi ရဲ့ ဦးအောင်ဇေယျ ဘုရားကို တွေ့ တော့ ကျနော့်အတွေ့ အကြုံလေး ရှယ်ပေးချင်ပါတယ်။ မဲ့ဆောက်၊ ချင်းမိုင်၊ စံခလပူရီ၊ ကန်ချနပူရီစတဲ့ မြို့ တွေမှာ ကျနော်နေခဲ့ဘူးတော့ ထိုင်လူမျိူးတွေ ဘာကို ကိုးကွယ်လဲဆိုတာ ပြောပြချင်လို့ ။ သူတို့ ဘုရားက ထီးမရှိပါဘူး။ ထီးမတင်ရဘူးလို့ ဆိုပြီး ဦးအောင်ဇေယျက အမိန့် ရှိခဲ့တယ်။ ထီးတင်ဖို့ ကျိူးစားတာနဲ့ ထိုင်းတွေ တခုခုတော့ ဖြစ်တယ်။ မိုးကျိူးပစ်ခံရခြင်း၊ ရေကြီးခြင်းစတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတော့ ထိုင်းတွေ ထီးမတင်ရဲတော့ဘူး။ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပဲ ရေးပြချင်ပါတယ်။ စိတ်တော့မဆိုးပါနဲ့ ။ အသက်ကြီးကြီး ပညာမဲ့တဲ့ ထိုင်းတွေရဲ့ ခါးမှာ အမြဲတန်း သစ်သားနဲ့ ထုထားတဲ့ လီးချောင်းကြီးကို ဆောင်ထားတယ်။ အဲဒိဟာကြီးကို ရွှေချထားပြီး ကြိုးအနီနဲ့ ပတ်ထားတယ်။ နောက်ပြီးသူတို့ အိမ်ရဲ့ အိမ်ဦးခန်းမှာလည်း အဲဒိလီးကြီးကို သေသေချာချာ ချိတ်ထားတယ်။ ဘာ့ကြောင့်သူတို့ ကိုးကွယ်လဲဆိုတော့ နေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင် အဲဒိအချောင်းကြီးနဲ့ တို့ ထိပေးရင် ပျောက်တယ်လို့ အယူရှိတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းထိုင်းတွေကတော့ ဒါကို မယုံတော့ဘူး။ အဘိုးကြီးတွေအဘွားကြီးတွေတော့ ယုံတုန်းပဲ။ တနေ့ မှာ ဦးအောင်ဇေယျက စစ်နိုင်ပြီး မြန်မာပြည်ကို ပြန်ဖို့ လုပ်တယ်။ ပန်းပု ပန်းရံနဲ့ ကချေသည်တွေကို မြန်မာပြည်ကို ခေါ်ဖို့ စီစဉ်တယ်။ လူအတော်များတယ်လို့ ဆိုတယ်။ တချိူ့ ဦးအောင်ဇေယျအပေါ် အရမ်းကိုယုံတဲ့ထိုင်းလူမျိူး သစ္စာခံတွေကို နယ်စားပယ်စားတွေပေးခဲ့တယ်။ သူတို့ ယုံကြည်ရတဲ့ဘုရင်ကြီး ပြန်ခါနီးတော့ ထိုင်းတွေမေးတယ်။ အရှင်ဘုရား ကျနော်မျိူးတို့ မှာ ဘုရင်လည်းမရှိတော့ဘူး၊ အရှင်ဘုရားကလည်း နေပြည်တော်ကိုပြန်မယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဘယ်သူ့ ကို ကိုးကွယ်ရမလဲမေးတယ်။ အရမ်းအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ဦးအောင်ဇေယျက ဒေါကန်ပြီး ထိုင်းတွေကို ဒီလိုပြောခဲ့တယ်။ ငါ့လီးသာ ကိုးကွယ်ကြဟေ့….တဲ့ဗျာ။ ဒါနဲ့ ထိုင်းတွေရဲ့ ခါးမှာ အိမ်တွေမှာ သစ်သားနဲ့ ထုပြီး ရွှေချထားတဲ့ အဲဒိအချောင်းကြီးရှိနေတာလို့ထိုင်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာနေတဲ့ မြန်မာနဲ့ အနွယ်ဝင်ထိုင်းတွေ အသံဝဲဝဲ နဲ့ ကျနော့်ကို ပြောပြဘူးတယ်။ ကျနော်လည်းတွေ့ ဘူးတယ်။ နောက်ပြီး ဦးအောင်ဇေယျက ထိုင်းမချောချောလေးတွေ နဲ့ပညာရှင်တွေကို မြန်မာပြည်ကို ပင့်သွားတယ်မှတ်လား။ သူ့ တို့ အကူအညီနဲ့ ဘုရားတွေတည်တယ်။ နောက်ဆုံး ပုဂံက ပုရားတွေအများစုလေ့လာကြည့်ပါ။ထီးမရှိဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဦးအောင်ဇေယျခေါ်လာတဲ့ထိုင်းသု့ံပန်းတွေ တည်တာလို့ ပြောကြတယ်။ နောက်ပြီး မွန်ပြည်နယ်နဲ့ ကရင်နယ်စပ်အနီး မြန်မာဘက်အချမ်းမှာ လောရှမ်းတွေနေကြတယ်။ အဲဒိရှမ်းတွေက ဦးအောင်ဇေယျထိုင်းကခေါ်လာခဲ့တဲ့ ထိုင်းတွေလို့ သူတို့ ကို သူတို့ အယူရှိတုန်းပဲ။ ကျနော်ရှေ့ တန်းထွက်တုံးက အဲဒိရွာမှာ အကြာကြီးနေခဲ့ဘူးတယ်။ ကောင်မလေးတွေအရမ်းလှကြတယ်။ ရှေ့ တန်းကအပြန်မဲ့ဆောက်ရောက်တော့ ကျနော့်ကို ထိုင်းရဲဖမ်းတယ်။ ထိုင်းအချူပ်ထဲမှာ နေတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာတွေကိုလည်းတွေ့ ရတယ်။ သူတို့ ထဲက အသက်သုံးဆယ်အရွယ်ဗမာတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်က အောင်ဇေယျလို့ ခေါ်တယ်။ ထိုင်းရဲက မေးတယ်။ မင်းနာမည်ဘယ်သူလဲတဲ့။ ဒီလူက အောင်ဇေယျလို့ ဖြေတယ်။ အော်ဇေယျလို့ ဖြေတိုင်း ရဲက တစ်ချက်ကန်တယ်။ နောက်တခါထပ်မေးတယ်။ နာမည်ဘယ်သူလဲ။ အောင်ဇေယျလို့ ဖြေတယ်။ ထပ်ကန်တယ်။ နောက်ပိုင်းဒီလူက သူ့ နာမည်ကို ပြောင်းခဲ့ရတော့တယ်။ ထိုင်းတွေက ဦးအောင်ဇေယျကို အရမ်းစိတ်နာတယ်။ အယုတ်ဒယကိုသိမ်းတုန်းကဆိုရင် အကုန်သတ်ပဲ။ ပုခတ်ထဲက ခလေးတွေ့ ရင် ဝါးချွန်နဲ့ စွတ်တယ်။ ငါးကိုမီးကင်သလိုပဲ။ ပြီးရင် ခလေးကို မျှောက်ပြီး လှံနဲ့ စွပ်ထိုးတမ်းကစားတယ်။ ထိုင်းမတွေကို မုဒိမ်းကျင့်တယ်။ ထိုင်းယောက်ျားတွေကို ဖင်ချတယ်။ အဲလောက်ထိဆိုတော့ ထိုင်းတွေက တအားကြောက်တယ်။ ရွံတယ်။ ခင်ဗျားတို့ မယုံရင် အယုဒယကို သွားကြည့်။ ထိုင်းသမိုင်းကိုဖတ်ကြည့်။ မြန်မာတွေဟာ ထိုင်းရဲ့ ရန်သူပဲ။ သူတို့ နိုင်ငံကို မြန်မာပဲကျူးကျော်ခဲ့ဘူးတယ်။ တခြားလူမျိူးတွေက ညှိရနိုင်းရလွယ်တယ်။ မြန်မာဘုရင်နဲ့ ဗိုလ်ချူပ်တွေကိုတော့ ထိုင်းတွေဖင်တုန်အောင်ကြောက်တယ်။ ဟိုကောင်တွေက မထင်ရင် မထင်သလို လုပ်တာဆိုတော့။ ကျနော့်အတွေ့ အကြုံကို တင်ပြတာပါ။ ရိုင်းတဲ့စကားကို ရှောင်ပြီးဖတ်ပေးပါဗျာ။ ဆောရီး။
မြန်မာဖိုက်တာတွေက အထီလဲ အလွတ်မပေး အမလဲ အလွတ်မပေးပါကလား…
အဲတာကြောင့် မြန်မာတွေကို သိပ်ချစ်နေကြတာပေါ့နော်..
ခင်ဗျား ဓာတ်ပုံ ထပ်မတင်တော့ဘူးလားဗျ
လုပ်ပါဦး…ခင်ဗျားက ခန့် ချောကြီးဗျ
ဗလတောင့်တောင့် ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ရေလည် စတိုင်လ်ကျတယ် ကဖုန်းပြောင် အဲလေ ကဖုန်းကျော်ရဲ့
ကိုဖုန်းကျော် လဲ အဲ့ဘက်မှာ အနေကြာခဲ့တဲ့သူဆိုတော့
သူလဲ ပြောမရဘူး ။
အဲဒီ အရုပ်အကြောင်း က လဘက်ရည်ဝိုင်းတွေမှာ ကြားဖူးနေခဲ့တာ ၊ ပုံပြင်မှတ်နေခဲ့တာ
အခု ကဖုန်းကျော် ကောင်းမှုနဲ့ သမိုင်းအမှန် ကို သိရတာပ ။
ဒါကိုမပြောခင်..ကိုရင်ဘုန်းကျော်ရဲ့.. ပုဂံနဲ့..ဦးအောင်ဇေယျ(အလောင်းဘုရား(၁၇၁၄ – ၁၃ ဧပြီ ၁၇၆၀))ဆက်စပ်ထားတာပြောချင်တယ်..။
ပုဂံပျက်ပြီးမှ(အေဒီ ၁၃၀၀လောက်..နရသီဟပတေ့).. ကုန်းဘောင်မင်းဆက် ပါ..။
ဆိုတော့..ခေတ်ချင်းမတူပါဘူး..။ပုဂံပုထိုးတွေတည်တာနဲ့.. နှစ် ၄၀၀ကျော်ကွာနေတယ်..။
Sun Temple at Konark: Where the Sun Gods Blessed Ancient India …
Nov 13, 2008 – The magnificent Sun Temple at Konark is the culmination of Orissan temple architecture, and one of the most stunning monuments of religious …
အိန္ဒိယမှာ.. အာသောကမင်းနောက်.. ဘီစီ ၃၀၀လောက်..နောက်ပိုင်းမင်းတွေက.. ဟိန္ဒူမင်းတွေ..
အင်ပါယာအင်မတန်ကြီးပြီး.. အိန္ဒိယတိုက်ငယ်အပြင်.. အရှေ့တောင်အာရှကို ဟိန္ဒုသာသနာပြုခဲ့တယ်..
ရှေးမြန်မာ ပျူ.သရေခေတ္တရာ..အကုန်..။ ကမ္ဘောဒီယား၊ မလေးရှား(မာလာယု). အင်ဒိုနီးရှား အကုန် ဟိန္ဒူအငွေ့အသက်လွှမ်းခဲ့တာပါ..
ပုဂံလက်ရာတွေကလည်း.. ဟိန္ဒူလက်ရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ.. ခေတ်ပြိုင်နဲ့ခေတ်စော အိန္ဒိယလက်ရာတွေနဲ့ယှဉ်ကြည့်သိနိုင်ပါတယ်..။
အခုထိ..မြန်မာပြည်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာ.. ဟိန္ဒူ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရောနေတယ်လို့.. ထင်မိတယ်..။
၃၇မင်းနတ်တွေ.. ဘိုးတော်တွေ.. အင်းအိုင်ခလှည့်လက်ဖွဲ့တွေဟာ.. ဟိန္ဒူရဲ့.. တဖက်လှည့် သာသနာပါ..။
ပြောရရင် ဗုဒ္ဓဂါယာလည်း.. ဟိန္ဒူလွှမ်းခဲ့တယ်…။
အဲဒီထဲ.. တပိုင်းတချို့က.. ယောနိ..ယောဝ ကိုးကွယ်တာရှိတယ်..။
ယောက်ျားမိန်းမ အင်္ဂါကို ကိုးကွယ်တာပေါ့..။
ဗုဒ္ဓဂါယာမှာ.. အဲဒီအထိမ်းအမှတ်တွေ တော်တော်များများရှိခဲ့တယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်..။
တကယ်တော့.. ယောနိယောဝ ကိုးကွယ်တာက.. ဗုဒ္ဓလက်ထက်လောက်ကတည်းကလို့ ထင်မိတာပဲ..
The Lingam is the symbol ofavery special part of the Hindu god Shiva’s body. (Hint: It’s his cock.) Within the trinity of Hinduism, Shiva is the god of destruction and change. How much of that destruction is wrought with his four arms and how much comes from his manhood? We leave that to the reader to decide.
In Hindu mythology, when Shiva is killed, the goddess Kali squats over his body, rips out and eats his organs, and then mounts his still erect manrod to complete the cycle of creation. It’s also worth noting that in most Hindu art and temples, his “linga” is usually depicted without the rest of him, the disembodied member being worshiped all by itself:
Read more:5Inspiring Religions That Worship Penises | Cracked.com http://www.cracked.com/article_16103_5-inspiring-religions-that-worship-penises.html#ixzz1pjRq9L00
ထိုင်းတွေ.. ယေင်္ကျားအင်္ဂါကိုးကွယ်တာ.. အလောင်းဘုရားနဲ့မဆိုင်ပဲ.. အဲဒီဟိန္ဒူကိုးကွယ်မှု..နတ်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ထင်မိပါကြောင်း…။
ဒါ့ကြောင့် ၊အဲသည်ထိုင်းဒွေ မြန်မာအရေးမှာ ၀င်ဝင်ခြေရှုပ်ပြီး၊အမြတ်ထုတ်ပြန်ရယူနေတာပေါ့ဗျား။
ကဖုန်းကျော်ပြောတာအမှန်ဘာဘဲ၊ဆာဖာရီနားရောက်တော့ထိုင်းရိုးရာဆိုင်ကလေးဝင်ပြီးစားတော့၊သူရို့ဆိုင် အ၀င်စားပွဲကလေးပေါ်မှ ရှိုးကစ်ပေါ်မှာလေ ဟေး ဟေး ကဖုန်းကျော်ပြောတဲ့ ဟာကြီး ကိုပေါ်လစ် တောင်တိုက်ထားသေး၊အဲဒါကိုပုဂံပြားကလေးပေါ်သေချာတင်လို့၊ သည်မှာအမွှေးတိုင်တောင် ထွန်း ထားသေးသ ဗျား။
တစ်ချို့မိန်းမ၊ယောက်ကျား၊ခါးမှာသေးသေးကလေးချိတ်ထားဆိုပဲ၊သည်တော့သမိုင်းအရ မြန်မာကိုသူရို့သိပ် ကိုမုန်းတဲ့သူတွေများတယ်၊ အဲဒါ ပက်ပုန်း ကိုညဘက်သွားတော့၊ အဲမှာရောက်တာကြာနေပြီးတဲ့ ဆရာ ကသတိပေးဒယ်၊ မေးရင်မြန်မာကလို့မပြောနဲ့ ၊ အင်္ဂလိမ်လိုသာခပ်တည်တည်ပြော၊အဲ မြန်မာဆို အင်ဒိုက လို့ပြော ယုံသဗျား။နောက်အင်္ဂလိပ်လိုခပ်မွှတ် မွှတ်လေးငါးခွန်း ပစ်ထည့်လိုက်အဲဒါသူရို့အနားမကပ်တော့ ဘူး။
မိန်းကလေးဒွေဖမ်းမိဒယ်ဆို ရဲတွေက သူတို့ကားထဲမဖွယ်မယာ အကုန်လုပ်ပြီးပညာပေးတော့တာတဲ့၊
ဟိုးတုန်းကဆို ပါ့စ်ပို့စ်ပြရင်တောင်မင်းဟာအတုနေမှာမလိုချင်ဘူးစခန်းလိုက်ခဲ့ဆိုပြီး၊ ထိုးကြိတ် အမြတ် ထုတ်လိုက်သေးသတဲ့ဗျား။ခုမှတော်သွားဆိုပဲ။
အဲသည်တော့ ရှေးက စစ်ဘုရင်ကြီးဒွေ လောဘကြီးတာနဲ့ကျုပ်တို့မျိုးဆက်သစ်တွေမှာ ခံနေကြရတာ
သင်ခန်းစာပဲ၊ အဲသည်ဦးအောင်ဇေယျဘုရားမှာ သူတို့ထံမှ ဖမ်းပြီးခေါ်ခံရတဲ့ ထိုင်းမင်းသမီးနဲ့မောင်နှစ်
ယောက်ပုံတွေရုပ်ထုထားပြီး ထိုင်းတွေအဲသည်ရုပ်ထုတွေကို ယနေ့အထိပူဇော်ကြသဗျား။ သမိုင်းမမေ့ အောင်လို့တဲ့၊အယုဒယကိုလည်းမြို့ပျက်အတိုင်းထားတုန်း၊ ဦးအောင်ဇေယျဘုရား ကုန်းမှာ သူတို့ ထိုင်းတွေ ရယ်ဒယာ ချေတဲ့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်လှည့်ပြီး ကင်းမီးကောက် မဲမဲကြီးမာန်ဖီနေ တဲ့ရုပ် ထုကြီးလည်းထုထားပါသဗျား။
အလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်ဇေယျကနံနှိမ်တဲ့အနေနဲ့ ကင်းမြီးကောက်ရုပ်ထုအကြီးကအမြီးကိုလည်း ယိုးဒယားတွေရဲ့ အတွင်းဖက်လှည့်ထားခဲ့လို့..
ဟိုက် ယာက်ျားတွေကိုလဲ အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါလား။ အရင်ကတော့ မိန်းမတွေလောက်ပဲ လို့သိထားတာ။ ဟုတ်ပါ့မလား ကိုဘုန်းကျော်ရယ် ကြံကြံဖန်ဖန်ဗျာ။
ဦးအောင်ဇေယျတပ်မှာ စစ်သည်အင်အားက သောင်းချီပြီး ရှိတယ်။ အယုဒယမှာ သေတဲ့ထိုင်းတွေက တောင်လိုပုံပဲ။ ထိုင်းမတွေနဲ့ ခလေးတွေပဲ အများစု အသက်ရှင်တယ်။ ဦးအောင်ဇေယျစစ်သားက များတော့ ရှိတဲ့ ထိုင်းမနဲ့ မလောက်ဘူး။ မြန်မာစစ်သားဆိုတာက ချဉ်ချဉ်ခါးခါး ဂရုစိုက်တဲ့လူတွေမဟုတ်တော့ ရတဲ့ဟာကို ကျိတ်မယ်ထင်တယ်။ ဒီအတွေးနဲ့ ပါ။ ဒီစာကလည်း ပါးစပ်ရာဇဝင်ဆိုတော့ ကြည့်ပြီးယုံပေါ့နော်…။ ဟဲ..ဟဲ။
paw tar says:
ကိုဘုန်းကျော် ထိုင်းတွေ အလောင်းမင်းတရား ဦးအောင်ဇေယျ ကို မုန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကို အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းစပ် ပြီးရေး သလို ထိုင်းတွေ ဘုရင့်နောင် ကို အရမ်းချစ်ကြတဲ့အကြောင်းကိုလည်း အဲ့လို လေး ရေးကြည့်ပါလားဗျ။
သဂျီးကိုယ်တိုင်က စောက်ဂရုမစိုက်တော့ ကိုယ်ကဘလိုင်းကြီးဖင်ဝင်ကျယ်ဘို့က ဂွကျတယ်
( အသက်ကြီးကြီး ပညာမဲ့တဲ့ ထိုင်းတွေရဲ့ ခါးမှာ အမြဲတန်း သစ်သားနဲ့ ထုထားတဲ့ လီးချောင်းကြီးကို ဆောင်ထားတယ်။ )
( အသက်ကြီးကြီး ပညာမဲ့တဲ့ ထိုင်းတွေရဲ့ ခါးမှာ အမြဲတန်း သစ်သားနဲ့ ထုထားတဲ့ ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါအချောင်းကြီးကို ဆောင်ထားတယ်။ )
( ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါစပ်အချောင်းကြီးကို )
( အရမ်းအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ဦးအောင်ဇေယျက ဒေါကန်ပြီး ထိုင်းတွေကို ဒီလိုပြောခဲ့တယ်။ ငါ့လီးသာ ကိုးကွယ်ကြဟေ့ )
( အရမ်းအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ဦးအောင်ဇေယျက ဒေါကန်ပြီး ထိုင်းတွေကို ဒီလိုပြောခဲ့တယ်။ ငါ့-ီးသာ ကိုးကွယ်ကြဟေ့)
ငါ့ လိင်အင်္ဂါအချောင်းကို
ငါ့ Rocket ကို
( ဒီနေရာမှာ လေနည်းနည်းလေရှည်ဦးမှ )
အချို့များ အဲ့သည် ဟဝှာကြီးကို ဖွားဖက်တော်ဆိုပြီး သုံးလေ့သုံးထရှိတတ်ကြတာ
စာပေထဲပါတဲ့ ဖွားဖက်တော်ဆိုတာက အဲ့သည်ဟဝှာကို ဆိုထားတဲ့သဘောမရှိတဲ့အတွက်
စောက်ရေးမပါဘူးလို့ ထင်ရင်လည်း စောက်ဂရုမစိုက်နဲ့ပေါ့ကွာ
ဒါက ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ဘာသာရေးဖက်ကညွှန်းပြီးပြောတာ
ဆိုခြင်တာက သမိုင်းဆိုတာက သမိုင်းဆရာဆိုတဲ့သတ္တဝါတွေက
လွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို သူတို့အဘက ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ကြည့်ခဲ့ဘူးလို့
သူတို့ကိုပြန်ပြောပြသလိုဘာလိုလို ကိုယ်လိုသလိုရေးထားကြတာတွေကို စောက်ရူးမထကြဘို့နဲ့
စစ်အစိုးရကို ကပ်ဖားယပ်ဖားလုပ်ပြီးစာရေးတတ်တဲ့ ဒေါက်တာမတင်ဝင်း ရေးထားတဲ့
အားလုံးကို လက်မခံပေမယ့် ဆက်စပ်တွေးတောဘို့တော့နည်းနည်းအစဉ်ပြေနိုင်တဲ့အတွက်
ဦးဖုန်းကျော်ရဲ့ ပိုစ့်ထဲမှာပါတဲ့ အလောင်းတရားကြီးဦးအောင်ဇေယျရဲ့စကားတခွန်းဖြစ်တဲ့
( ငါ့လီးသာ ကိုးကွယ်ကြဟေ့ )
ယနေ့လက်ရှိ ကျုပ်ကိုယ်တိုင် တွေ့ဘူးတဲ့ ထိုင်းလူမျိုး ( အချို့ ) တွေ အရေးတယူရှိလှတဲ့ အနှီး
ဟဝှာ ရုပ်တွေရယ်ကို ထောက်ရှု့ချိန်ဆကြည့်ခြင်းအားဖြင့်
ဦးအောင်ဇေယျတည်းဟူသော ထိုမုဆိုးဖို ရွာသူကြီးသည်
သဂျီးမင်း၏ အလိုတော်အတိုင်း မည်သူနှင့်မျှမတူအောင် တွေးတောမှတ်ချက်ချလိုက်ရပါတော့သတည်း။
( ဂေဇက်သဂျီးတော့ ဘယ်လိုနေသည်မသိ )
“ ငါ့ညီလေး ” လို့ သုံးလဲ ရပါတယ် နော
လီးလိုမှပဲ လီးစကားပြောတော့ လီးဂျားပြင်းကပ်တယ်။ လီးလိုမိုလို လီးချိုးချိုးဂျေးဆို အားလုံးကို လီးပဲဟေ့ (မှတ်ချက်။ ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးမပါ၊ မိတ်ရင်းဆွေရင်းများမပါ)
khinsaw aye says:
ငါးဖမ်းသင်္ဘောက ထိုင်းကောင်တွေ ပုသိမ်ထောင်ကိုရောက်လာတုန်းက သူတို့ တွေမှာပါလာတဲ့ (ဟိုကိုပုပြောသလို သစ်သားနဲ့ထုထားတဲ့ ယောက်ျား Tues day ကြီးတွေကို ၀ါ့ဒါ တွေက သိမ်းလိုက်တော့
ရွှံ့တွေနဲ့ ပြန်လုပ်ပြီး ခါးမှာ ချီထားကြတယ်၊အဲဒီဟာကြီး ကိုကြောင်လေးငယ်ငယ်ကတွေ့ဖူးတယ်။
မြန်မာပြည်ကို စီးပွားရေး၊ စစ်ရေးအရ အလစ်ချောင်း နေတဲ့အထဲမှာ ထိုင်းတွေပါတယ်၊အရင်စစ်ခေါင်းဆောင်တေ၊ွချည်း အပြစ်မပြောနဲ့၊ ဒီဘက် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ်ကျိုးရှာ ပြီးနိင်ငံ မတိုးတက်လို့(အလုပ်အကိုင်ရှားလို့)လက်အောက်ခံ ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာဒီဘက် ခေတ်မြန်မာတွေ ခေါင်းငုံ့ခံ အလုပ်လုပ် နေကြရတာ ရင်နာတယ်၊ အခြား နိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်လုပ်တာကတော့ ရာဇဝင် မဆက်စပ်လို့ထားပါတော့၊
သောင်းကျန်းသူတွေကို Buffer ခံတဲ့အကျင့်က ဟိုးအရင်ကတဲက ထိုင်းတွေရဲ့ အကျင့်ဘဲ။
နောက်ထပ် ရာဇဝင်အရ မယုံရတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ကတော့ တရုတ် နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ ဘဲ။